မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): တစ်သက်နဲ့ တစ်ခါသာ ကံစမ်းမဲပေါက်ဖူးတဲ့ ကံထူးရှင်လေး
တစ်သက်နဲ့ တစ်ခါသာ ကံစမ်းမဲပေါက်ဖူးတဲ့ ကံထူးရှင်လေး
( ဟလို )
( မင်္ဂလာပါရှင့် လူကြီးမင်းက ကျမတို့ ကုမ္မဏီရဲ့ တတိယမြောက် ကံထူးသူဖြစ်ပါတယ်ရှင့် )
( ဗျာ ဟုတ်လား ဘာကံထူးသွားတာလဲ )
( ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့် လေးနိူင်ငံ ဘုရားဖူးခွင့်နဲ့ ညစာစားပွဲ လက်မှတ်ကို ကံထူးသွား ပါတယ်ရှင့် )
( ဘယ်နေ့ သွားရမှာလဲ )
( ဒီလကုန် ပါရှင့် အခမ်းအနား ကတော့ မသွားခင် ၂ ရက် အလို ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး နယ်က လူအတွက်ဆို ဟော်တယ် စီစဉ်ပေးပါတယ် ရှင့် )
( ဟ! မိုက်သကွာ )
( ရှင်!! )
( အော် ပျော်သွားလို့ပါ )
( ကျမတို့ ပစ္စည်းကို သုံးရတာ အဆင်ပြေလားရှင့် )
( ပြေတယ်ခင်မျ အရမ်းပြေ )
ကံစမ်းမဲ ပေါက်ပြီဆိုတော့လဲ ဖောထည့်ရတာပဲ
( နောက်ပြီး ကျမတို့ ကုမ္မဏီက ပစ္စည်းကို ယုံကြည်စွာ သုံးစွဲသူအဖြစ် 2019 calendar မှာလဲ လူကြီးမင်းရဲ့ အလှ ဓာတ်ပုံနဲ့ ပါဝင်ခွင့်ရမှာပါ )
ငါတော့ နာမည်ကြီးအုံး မှာဟ
( အဲ့တာ လူကြီးမင်း အနေနဲ့ သဘောတူ ပါသလား )
( တူတယ် တူတယ် )
( အခုက ခရီးစဉ်ကို လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချိန် ရအောင် ကြိုတင် အကြောင်းကြား ပေးတာ ပါရှင့် )
( လိုက်မယ် လိုက်မယ် )
( သေချာပါ သလားရှင် )
( သေချာတယ် လုံးဝ သေချာတယ် )
( ဟုတ်ကဲ့ နာမည်လေး ပြောပါ )
( ငအွပ်တ်ပါ )
( မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နဲ့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အမြဲတမ်း နေရပ် လိပ်စာလေး.. )
( ဒါနဲ့ နေပါအုံး အခု မဲပေါက်တာ ဘယ်ကုမ္မဏီက လဲ ဗျ )
( Eva ကပါရှင့် )
( ဟုတ်ကဲ့ ရှင့် လမ်းခရီး တစ်လျှောက်လုံး ကျမတို့ Eva logo နဲ့ စိတ်ချ ယုံကြည်စွာ ခရီး သွားရမှာ ဖြစ်ပြီး Eva ကို ယုံကြည်စွာ သုံးစွဲသူများ အဖြစ် မှတ်တမ်းထဲ ပါဝင်ခွင့် ရမှာပါ )
( ဘာ!! ဟလို ဟလို မ .. ဖီ ... လား .. မ ... သား ... )
တူ တူ တူ ~~~
အရူးကွက် နင်းပြီး ဖုန်းချလိုက် တာပေါ့
ငိုးမ ဘယ့်နှယ်ကွာ မှားစရှားလို့ ငလူးဖဲ EVA က ဆိုပဲ
ငါ့မှာတော့ တစ်သက်နဲ့ တစ်ကိုယ် ကံစမ်းမဲ ပေါက်လို့ ရင်တွေ ပန်းတွေ တုန်လို့ ခုတော့ ..... ယအုပေါ့တွာ.....
Author MSSK at 1:09:00 PM